Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Blaogim-Piarahamonina GV tamin’ny Marsa 2017
Tantara mikasika ny Blaogim-Piarahamonina GV tamin'ny Marsa, 2017
12 Marsa 2017
Mpanoratra Nevin Thompson · Fifidianana
Nevin Thompson no anarako ary voatendry hofidiana ho solontenan'ny ekipa-tonia aho amin'ny fifidianana biraon'ny Filankevi-pitantanan'ny Global Voices hotontosaina amin'ny 16-20 Marsa 2017 ho avy izao.
Mpanoratra Rawan Gharib · Fifidianana
Rawan Gharib no anarako, anisan'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Lingua Arabo, monina ao Kairo. Mpanoratra liana kokoa amin'ny kolontsaina Amerika Latina/Afovoany-Atsinanana aho. Andao hanohy hanozongozona ny rindrina sy hanamboatra tetezana!
Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon · Fifidianana
Ary tamin'izany no nidiran'ny Global Voices teo amin'ny fiainako, zava-baovao izay nanova ahy tanteraka... ary mino aho fa torak'izany koa ny GV
Mpanoratra Mong Palatino · Fifidianana
Ry namana sy mpiara-miasa, Mabuhay! Sady faly aho no heni-boninahitra voatendry hofidiana solontenan'ny tonia ato amin'ny biraon'ny Global Voices.
11 Marsa 2017
Lingua: Febroary 2017
Mpanoratra Nwachukwu Egbunike · Fifidianana